बैदेशिक रोजगारीको लागी यी देशमा जान एक पैसा तिर्नु पर्दैन, पैसा मागे यसो गर्नुहोस ! – Khabarhouse
बैदेशिक रोजगारीको लागी यी देशमा जान एक पैसा तिर्नु पर्दैन, पैसा मागे यसो गर्नुहोस !
Khabar house | ८ माघ २०७६, बुधबार ०९:४७ | Comments
काठमाण्डौ : नुवाकोटका हेम बहादुर तामाङलाई मलेसिया पठाउने भन्दै ९८ हजार रुपैयाँ लिइ रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले भिजन भ्यालू ओभरिजमा मंगलबार छा’पा मा’र्‍यो । मलेसियामा से’क्युरिटी कम्पनीमा पठाउने भन्दै ओभरसिजका जनसम्पर्क अधिकृत भेष केसीले आफ्नै कार्यकक्षमा रकम लिंदै गरेको अवस्थामा विभागको टोलीले फेला पारेको थियो ।
विभागले पैसा लिंदै गरेको भेटेपछि हेमबहादुर ठ’गीमा पर्नबाट जोगिनुभयो । हेमबहादुरलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक भीष्म कुमार भूसालले बताउनु भयो। यूएई र खाडीका अरु देशमाजस्तै मलेसिया जान श्रमिकले एक पैसा पनि तिर्नु पर्दैन । तर म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट जथाभावी रकम अ’सुल्दै आएका छन् ।
गएको पुस २गते लाइफ इन्टरनेशनल ओभरसिजले मलेसिया जाने तयारीमा रहेका गुल्मी रेसुङ्गाका अनिल बिक,सन्दीप बिक र दीपक बहादुर सुनार तथा बराह नगरपालिका सुनसरीका सन्तोष बिष्टसँग ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिंँदै गरेको अवस्थामा विभागले छापा मा’रेको थियो । ४ जना युवा मलेसियाको अबिबा प्लास्टिक उद्योगमा कामका लागि जान इजाजतपत्र नम्बर ७६० भएको महाराजगञ्जमा रहेको लाइफ इन्टरनेशनल ओभरसिजका जन सम्पर्क अधिकृत दान बहादुर सोमैलाई सम्पर्क गर्दा उनले ‘मलेसिया जानु भनेको अमेरिका जानु सरह हो, १ लाख ३५ हजारमा एक पैसा कम हुन्न’ भनेर त्यसैअनुसारको पैसा लिँदै गर्दा विभागले फेला पारेको थियो ।
यस्तै गएको महिना नै यूएई जाने श्रमिकसँग दुई लाख ५ हजार लिंदै गर्दा बानेश्वरको ओशो रि’क्रुटमेण्टमा विभागले छापा मार्‍यो । सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउनेगरी नयाँ समझदारी गरेको देश यूएई पठाउन दुई लाख ३० हजार मागिरहेको उ’जुरीको आधारमा विभागले म्यानपावरमा छा’पा मा’र्दा श्रमिकसँग पैसा लिएर गन्दै गरेको भेटिएको थियो । पैसा लिंदै गरेको अवस्थामा भटेपछि श्रमिकलाई सरकारी नियम अनुसार विदेश पठाउन पत्राचार गर्दै विभागले थप का’रबाही अघि बढायो ।
कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया र यूएई मात्र हैन, अरु देशमा पनि पठाउँदा सरकारी नियमभन्दा बढी रकम मागेमा उ’जुरी गर्न विभागका महानिर्देशक भीष्म कुमार भूसालले अ’नुरोध गर्नु भएको छ । मलेसिया र यूएईसँग मात्र हैन, फ्री भिसा फ्री टिकट नियम अनुसार खाडीका देशमा जान श्रमिकले सेवा सुविधाबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । तर म्यानपावर र एजेण्टले आफूखुशी पैसा लिइरहेका भेटिएको छ ।
अहिले त एजेण्ट रहने व्यवस्था पनि खारेज भइसकेको छ ।तर विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिक अझै पनि एजेण्टमार्फत नै ठ’गीमा परिरहेका छन। त्यसैले विदेश जानेबेला ठ’गीबाट जो’गिन सबैभन्दा पहिला आफैं स’चेत हुन विभागले अ’नुरोध गरेको छ। सबै भन्दा पहिला त आफू जाने देश र गर्ने कामका बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ । हिजोआज विदेशमा पाइने काम र तलबसहित सेवासुविधाको बारेमा जान्न म्यानपावरको भर पर्न पर्दैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागको वेवसाइट www.dofe.gov.np मा गएर नै विदेशमा पाइने काम र तलबको बारेमा सजिलै जानकारी पाउन सकिन्छ । यति मात्र हैन, अनलाइनबाटै आफूलाई मन परेको कामका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । त्यसो हुँदा सिधै अन्तर्वार्ता का लागि मात्र म्यानपावर जाँदा हुन्छ । अथवा कसैको सहयोगमा म्यानपारसम्म आइपुग्नु भएको छ भने पनि त्यो म्यानपावर सं’स्था कस्तो हो, विभागबाट इजाजत प्राप्त हो वा होइन, का’लोसूचीमा पो परेको छ कि भनेर जाँच गर्नुपर्छ ।
यो जाँच पनि विभागकै वेवसाइटबाट गर्न सकिन्छ । कतिपय म्यानपावर र एजेण्टले तपाईँसँग छनोट प्र’क्रिया नै पूरा नगरी रकम माग्ने, पासपोर्ट माग्ने गर्छन् भने नदिनुहोस् । हिजोआज श्रमिक छनोट प्र’क्रिया अनलाइन बाटै हुने भएकाले पहिले नै म्यानपावर कम्प नीलाई पासपोर्ट बुझाउन पर्दैन । अनलाइन आवेदन दिँदा पासपोर्ट नम्बर राखे पुग्छ । तपाईँ छनोट हुनुभयो भने मात्र भिसा प्रक्रियाका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई पासपोर्ट बुझाउँदा हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ श्रम स्वीकृति नहुँदै उडानको मिति तो’केर पनि ठगी गर्न सक्छन् ।त्यसैले पैसा बुझाउनु अघि स’चेत हुनु पर्छ। हिजो आज श्रम स्वीकृति लिनका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिन्छ । इमेल मार्फत श्रम स्टिकर पाइन्छ । अनि श्रम स्वीकृति भएको जानकारी म्यासेजमार्फत मोवाइलमै आउँछ । त्यसैले कसैको कुरामा विश्वास गर्नुअघि आफ्नो मोवाइलमा म्यासेज आयो कि आएन भनेर पनि जाँ’च गर्न पर्छ ।
आर्थिक कारोबार गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि दिएको भन्ने प्र’योजन खुलाउन पर्छ । लागत बढी मागेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै उजुरी र गुनासो भएमा कल सेन्टर १६६००१५०००५ मा र विभागको टोल फ्री नम्बर १६६००१०९९९९ मा फोन गर्न सकिन्छ ।